ပါရဂူဘွဲ့တွေရရှိပြီး နိုင်ငံခြားမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ ဒေါက်တာချောချောလေးနဲ့ချစ်သူဖြစ်ပြီးမှ အပြင်းအထန်ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ မေမီကိုကို - Tha Dinn Oo
မင်းသမီးချောလေး မေမီကိုကိုကတော့ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲလေးတွေနဲ့ လူသိများအောင်မြင်လာခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ မေမီကိုကိုက ယနေ့အချိန်အထိတိုင်အောင် ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ အများအပြားရိုက်ကူးခဲ့ရပြီး ဇာတ်ရုပ်မျိုးစုံကို သဘာဝကျကျဖန်တီးနိုင်ခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်လို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်နော်။ မေမီကိုကိုက “ပျားရည်အိုင်၊ တတိယမြောက်ဆုံမှတ်၊ လိပ်ပြာနှောင်ကြိုး၊ ဂျီဟောသူ” စတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲလေးတွေနဲ့ ပိုမိုအောင်မြင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် မေမီကိုကိုက “ပလေယာ” ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သေးတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အေးအေးဆေးဆေးနေတတ်တဲ့ မေမီကိုကိုက မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းကပဲ သူမရဲ့ချစ်သူလေးကို အလင်းပြလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ မေမီကိုကိုရဲ့ချစ်သူလေးကတော့ ပါရဂူဘွဲ့တွေရရှိထားပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံရှိဆေးရုံတစ်ခုမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့ ဆရာဝန်တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖွင့်ချပြလိုက်တဲ့ မေမီကိုကိုတစ်ယောက်ကတော့ အခုဆိုရင် ဝေဖန်မှုတွေကို ခံနေရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီနေ့မှာလည်း မေမီကိုကိုက ” So sad နော် ပြောချင်ရင်လည်း reply ပြန်တာလေးတော့စောင့်ဦးလေ ဘာတွေ အဲ့လောက်ကြောက်နေတာလဲ အကောင့်တုနဲ့ဘလော့ပြီး အကောင့်အစစ်နဲ့ပြန်ကြည့်မယ့်အစ်မအတွက်” ဆိုပြီး သူမရဲ့Chat box အထိ လာရောက်ပြောဆိုထားတဲ့လူတစ်ဦးရဲ့စာတွေကို ပြသလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။မေမီကိုကိုရဲ့အချစ်ရေးက တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိနေပေမယ့်လည်း ဝေဖန်တိုက်ခိုက်သူတွေက သူမကို အပြင်းအထန်ပြောဆိုထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒေါက်တာချောချောလေးနဲ့ ချစ်သူဖြစ်ပြီးမှ ဝေဖန်ခံလိုက်ရကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ မေမီကိုကိုရဲ့စာလေးတွေကို ပုံနဲ့တကွ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
တစ်ကိုယ်လုံးချွတ်ပြကာ ပုရိသတွေကိုရင်ဖိုစေခဲ့တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်ဗီဒီယို
ရိသေတြရဲ႕အခ်စ္ေတာ္မေလး သ႐ုပ္ေဆာင္သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ဟာ စြဲမက္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ခႏၶာအလွေတြကို ပိုင္ဆိုင္သူေလးပါ။အခ်ိဳးအစားလွပတဲ့သူမရဲ႕ခႏၶာကိုယ္အလွေတြကို မၾကာခဏျပေလ့ရွိသူေလးဆိုလည္း မမွားပါဖူးေနာ္။ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္က သူမရဲ႕ မိေမြးတိုင္း ဖေမြးတိုင္းအလွေတြကို မေန႔ကသူမရဲ႕ Instagram စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ တင္ခဲ့ပါတယ္။အဝတ္ေတြကို အကုန္ခြၽတ္ျပကာ ဗီဒီယို႐ိုက္ကူးခဲ့တာပါ။သူမရဲ႕ဗီဒီယိုဖိုင္ကို ေဝဖန္သူမ်ားစြာရွိေနေပမယ့္လည္း သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ဘက္က ဘာလိုတုန႔္ျပန႔္မႈမ်ိဳးေတာ့မရွိေသးပါဖူး။ သင္ဇာရဲ႕ဗီဒီယိုဖိုင္ကို ပရိတ္သတ္ေတြအတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ အခုလိုအဆုံးထိဖတ္ရႈေပးတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ Page မွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္ေနာ္…ေနာက္မ်ားမွာလည္း အခုလိုဆယ္လီတို႔ရဲ႕ သတင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီတင္ဆက္ေပးမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ကြၽန္ေတာ္တို႔ Page ေလးကို Like & See First ေလးလုပ္ေပးသြားၾကပါအုံးေနာ္…. Source : Thinzar Wint Kyaw Unicode ပရိသတွေရဲ့အချစ်တော်မလေး သရုပ်ဆောင်သင်ဇာဝင့်ကျော်ဟာ စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ခန္ဓာအလှတွေကို ပိုင်ဆိုင်သူလေးပါ။အချိုးအစားလှပတဲ့သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလှတွေကို မကြာခဏပြလေ့ရှိသူလေးဆိုလည်း မမှားပါဖူးနော်။ သင်ဇာဝင့်ကျော်က သူမရဲ့ မိမွေးတိုင်း ဖမွေးတိုင်းအလှတွေကို […]
ရင်ခုန်စရာ အလှတရားတွေပေါ်လွင် လှပနေတဲ့ ဖတ်ရှင်လေး နဲ့ မိမိုက်နေတဲ့ ရှင်ယွန်းမြတ် Let Pan | December 29, 2020 | Celebrity | No Comments ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ ရှင်ယွန်းမြတ်ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ မြင်သူနကာ ငေးမောလောက်တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်းအလှတွေကြောင့် ပုရိသတွေရဲ့ အားပေး ဝန်းရံမှုကို ရယူထားထားသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခပ်မိုက်မိုက် စတိုင်စ်နဲ့ ဆွဲဆောင်မှုအားပြင်းတဲ့ ရှင်ယွန်းမြတ်က အခုလည်း ပုရိသတွေ ကြွေကျသွားအောင် ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ ဖမ်းစားလိုက်ပြန်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာလည်း အသားကပ် ဝတ်စုံလေးနဲ့ ဆက်ဆီကျကျ အမိုက်စာပုံရိပ်လေးတွေကို “ကျမ က အားနွဲ့သူ မိန်းမသားမို့နွဲ့ဆိုးဆိုးပြီး. အသဲယားရင် သုံးချက် ထိုးတယ် ( မိန်းခလေးသဘာဝ စိတ်ဆိုးပြီ ဆိုရင်တော့ငါးချက် ထိုးတတ်တယ် […]